China tank Top ụlọ ọrụ na-emepụta | Ọhụụ
* Scoop Olu
* 100% combed mgbanaka-agbakwunyere ezigbo owu jersey
* Ogologo Ogologo
* Dị n'elu 30 agba, pantone agba nwere ike e sijiri dị ka kwa gị mkpa
* Dakọtara ezinụlọ tankị dị (dị nnọọ zitere anyị)
* Heat nyefe ebi akwụkwọ, silk ihuenyo ebi akwụkwọ, embroidery wdg dị.
A fashionable, fun na, kacha niile, ala jersey super soft, vinteji n'ike mmụọ nsọ tank na-adị ka ị na-ekesịpde ya ruo ọtụtụ afọ. ọ dị njikere isoro ndị otu gị gaa n'akụkụ osimiri ma ọ bụ ihe omume ọkọchị ọ bụla dị n'èzí. Ndị tankị ndị a dị mma n'oge opupu ihe ubi & ọkọchị !!!
120 # #
140 # #
Nke gara aga: Omenala mma ụmụaka ụmụ edo owu pique polo Chiefs
Osote: T-uwe elu
Akuku Tank Top
Akwara tank Top
Polyester tank n'elu
omenala àgwà ụmụaka ụmụ edo owu piq ...